Isabella Arantes: Kpakpando Brazil meriri ụwa | TeraNews.net
Isabella Arantes: Kpakpando Brazil meriri ụwa
na-ede akwụkwọ Ozi Tera E bipụtara 12.04.2019
Akwukwo ndi mara mma adighi adi n’usoro - ka ha buru ndi amara aha ya, kpoo ndi Instagram ma mee ka ndi mmadu mara. Ablọ akwụkwọ akụkọ bụ Isabella Arantes (Isabella Arantes) sitere na Brazil. Nwatakịrị nwanyị ahụ na-ebipụta foto nke ya na ihe gbasara ejiji.
N'ịbụ onye debanyere aha na 2013 na obere ihe ndị ahụ na-elekọta mmadụ n'oge ahụ, Isabella nwetara ezigbo ndị debanyere aha 2019 50 site na afọ 000. Kpakpando Brazil ahụ na-ebugote foto na netwọk mmekọrịta ma na-ekerịta echiche ya banyere uwe. Karịsịa, ndị fashionista na-anọchi anya akara La Bella, nke edobere na mmepụta nke uwe ime.
Isabella Arantes: ndụ onwe onye
A mụrụ ihe nlere ahụ na 29 na June 1997 nke afọ (ọ bụ 21 afọ). Dabere na horoscope - kansa. Ebe omumu na ebe obibi - Brazil. Ihe omume ntụrụndụ - ịgba egwu. A maara na kpakpando nke Brazil bụ akụkụ nke otu ịgba egwu Domingao do Faustao. Ọlụ di na nwunye - alughi di. Ọ bụrụ na ikwere na mgbasa ozi, Isabella Arantes masịrị ya na ịma mma ya ama ama ama ama ama ama ama ama ama na bọọlụ Brazil - Neymar da Silva. Na foto foto dị na Instagram, na ngalaba "nke onwe", enwere foto Isabella naanị ya na nwa nwanne ya.
Isi ihe a na-enweta na ya bụ ntanetị ntanetị na ntanetị. Isi obodo nke ihe nlereanya a bụ ihe dịka 100 puku dollar. Afọ 2019 maka Isabella tụgharịrị ịbụ nke ọma. Ihe nlereanya ahụ bụ otu n'ime ụmụ agbọghọ iri mara mma na mbara ala. Stylists na-ekwu na kpakpando ọhụrụ ahụ sitere na Brazil nwere ọdịnihu dị mma.
Smartwatches na mgbaaka mgbaaka adịghị ewu ewu dịka anyị chere
Kedu ihe kpatara ị ga -eji zụta ngwa ọrụ ọkachamara
Smart watch Kospet Optimus 2 - ngwa na -atọ ụtọ si China
Ihe mkpuchi Pool
Ewu ọdọ mmiri - gini dị, njirimara, klọọkụ ka mma
Apple iPhone 13 - ụdị, ọnụahịa, foto, ụbọchị ngosi
Apple iPhone 11: niru nke akara nke smartphones
VONTAR X88 PRO: nnyocha, nkọwapụta
Mining cryptocurrency na SSD na HDD
Ndabere Smartphone - nyocha